सेनाले दिने सलामी किन अस्विकार गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
सेनाले दिने सलामी किन अस्विकार गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचार पुरा गरेर स्वदेश फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाले दिने सलामी ग्रहण अस्वीकार गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि मात्र गएकाले आफ्नो भ्रमण अनौपचारिक भएको बताउदै उहाँले सलामी अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
प्रमको स्वास्थ्य स्थितिबारे बुझ्न त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका पत्रकारलाई प्रत्रिक्रिया दिन समेत ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको छ । पत्रकारले स्वासस्थ्य स्थितिबारे बुझ्न खोज्दा केही दिनमा थाहा पाइहाल्नु हुन्छु भन्दै उहाँ विमानस्थलबाट बाहिरिनुभएको थियो ।
ओलीलाई स्वागत गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, बामदेव गौतमलगायतको टोली त्रिभुवन विमानस्थल पुगेको थियो ।
कार्यतालिका अनुसार शुक्रबार नै फर्कीने बताइएपनि स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट ढिलो आएको बताउदै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम पछि सारिएको थियो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
हेटौँडा- प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एशिया राजमार्गका रुपमा विकास गरिने पूर्वपश्चिम राजमार्ग
उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउन माग
काठमाडौँ – उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउन मौलिक जरोकिलो पार्टीले अनुरोध गरेको छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै
काठमाडौँ -नेताहरुको कार्यव्यस्तताका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको आजका लागि तय गरिएको